विशेष लेख : जो दिनहुँ मारिन्छन् तर, राज्य सुन्दैन - News Madhesh
जनकपुरधाम , २३ जेठ । यही जेठ १० गते साँझ भएको नृशंस हत्याको घटनामा भेरी नगरपालिका ४ का नवराज विक, गणेश बुढामगर र चौरजहारी नगरपालिका १ का टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका ११ का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका ४ का सन्दीप विकले ज्यान गुमाए । घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । समिति पनि विवादमा परेको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ । केटी पक्षका केही जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । छानविन समिति घटनास्थलमा पुगेको छ । के कस्तो प्रतिवेदन ल्याएर आउँछ, बाहिर आउने नै होला । यो प्रचारमा आएको विषय भयो । दलित विरुद्धका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भई नै रहेको छ र प्रतिरोधको ज्वाला पनि दन्केकै छ ।
दलितभित्रको पनि दलित मानिन्छ अल्पसङ्ख्यक डोम समुदाय अर्थात् मल्लिक । दलितभित्रैका तथाकथित उपल्ला अर्थात् ठूला जाति भनाउँदाहरूले डोम समुदायका जो कसैलाई अहिले पनि छुवाछूतजन्य व्यवहार गर्ने भएकाले डोम समुदायलाई दलितभित्रको पनि दलित भनिएको हो । तराई मधेशका गाउँहरुमा पाँच छ घरको समूहमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अधिकाँशको नागरिकता भए पनि जमीन भने छैन । जमीन नभएपछि स्थायी छानोको कुरा हुने भएन । त्यसैले पर्ती तथा ऐलानी जग्गामा झुप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका उनीहरूसँग आम्दानीको भरपर्दो स्रोत पनि छैन ।
डोम समुदायको आम्दानीको बलियो स्रोत चाहीँ सुँगुरपालन हो । तर चेतनाको अभाव र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सुँगुर पाल्ने पुख्र्यौली पेशालाई उहाँहरूले व्यवस्थित र स्वस्थ बनाउन सकिरहेको देखिन्न । व्यावसायिक रुपमा सुँगुर पालन गर्न सरकारले पहल गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा छ उहाँहरूको । डोम समुदायका मुखियामध्येका एक धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका मुखिया सिंहेश्वर मल्लिक डोम भन्नुहुन्छ – ‘सरकारले हाम्रो समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सहकारीको अवधारणामा सामूहिक सुँगुरपालनको व्यवस्था गरिदिएर बजार पनि खोजिदिने हो भने हाम्रो समुदाय आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्दैन ।’
यसका लागि सरकारले उनीहरूलाई सँुगुरपालनमा वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न विभिन्न तालीमहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सपरिवार सामूहिक रुपमा सुँगुरपालनमा प्रेरित भएपछि सरकारले तेश्रो मुलुकलाई लक्ष्य गरेर तराई मधेशमा सुँगुरपालन क्षेत्रको अवधारणा लागू गर्न सके उनीहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुनाको साथै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नमा समेत टेवा पुग्नेछ । यसका लागि उनीहरूले बनाउँदै आएका बाँसजन्य सामग्रीहरूलाई पनि हस्तकलाको रूपमा मान्यता दिएर विकास गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यसबाट डोम समुदायलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतो भने डोम समुदायलाई सुँगुरपालन गर्न हतोत्साहित गर्न नभई गाउँमा दुर्गन्ध फैलाउने भएकाले गाउँदेखि टाढा पाल्न आग्रह गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘डोम समुदायबाट कोही पनि सुँगुरपालनका लागि अनुदान र सहयोग माग्न आएको छैन । आए भने पक्कै प्राथमिकतामा राखेर सँंगुर बंगुरपालनका लागि हाम्रो नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ ।’
सङ्घीय सरकारको लगानीमा दलित लक्ष्यित गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले चलाएको जनता आवास योजना पनि डोम समुदायमा पुग्न सकेको छैन । भूमिविहीन उनीहरुसँग लालपुर्जा हुने कुरै भएन । लालपुर्जा नभएपछि यसको ‘चेन रियाक्सन’ (असरको श्रृङ्खला) राज्यका आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पर्ने नै भयो । यसैकारण उनीहरू प्राण र उज्यालोबाट वञ्चित छन् । खानेपानीको धारा पाउन र बिजुली बाल्न लालपुर्जा नभई हुन्न । त्यसैले उनीहरूको झुपडीको फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो दिने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष घोषणामै सीमित हुने जोखिम झन् बढेको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेपछि सरकारले डोम समुदायको जीवनस्तर उकास्न चाहेको बारे एक कार्यक्रममा सहभागी हुन सिरहाको लहान आएका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस संवाददातासँगको औपचारिक कुराकानीमा बताउनुभएको थियो ।
बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले तराई मधेशका डोम समुदायलाई सामूहिक सुँगुर तथा बंगुरपालनमा प्रेत्साहित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यका सम्बन्धित निकायमा पहुँच स्थापना गर्न हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । बाँस्कोटाको भनाई थियो – ‘सरकारले डोम समुदाय लक्ष्यित विभिन्न कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।’ तर अहिलेसम्म त्यसको छनक मिलेको छैन ।
बल्ल बल्ल आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन थालेका डोमहरू शिक्षाको अभावले गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र संविधान प्रदत हकअधिकारबारे पूरै बेखबर देखिन्छन् । उनीहरू आफ्नो हकअधिकारको विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्न सक्दैनन्, राखिहाले भने पनि उनीहरूका गुनासाको सुनुवाई हुँदैन । यसको एक कारणका रूपमा डोम समुदायका अधिकाँशले बिहानैदेखि मदिरा सेवन गर्नुलाई लिने गरिन्छ । यो समुदायका कसैले आना हकअधिकारका कुरा उठाइहाले भने पनि रक्सीको नसाको सुरमा बोलेको भन्दै विषयान्तर गर्ने गरिन्छ ।
डोम समुदायका कतिपयले त अझै पनि आना सन्तानलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । केहीका बालबालिका विद्यालय गइहाले पनि उनीहरूले चर्को विभेदको सामना गर्नुपर्छ । धनुषा, बडहरी ९ की ९ वर्षीया चाँदनी मल्लिक (हे. तस्वीर) भर्खरै स्थानीय सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान थाल्नुभएको थियो । विद्यालयमा साथीभाइ बनाउन पाएकी उहाँ नियमित विद्यालय जान पाउँदा खुबै रमाएको देखिन्थ्यो ।
तर दुई भाइहरु सोनु, सूरज र एक बहिनी रोशनीकी जेठी दिदी चाँदनीलाई घरपरिवारले भाइबहिनी हेर्न भन्दै विद्यालय जान रोकिदिए । बडहरी खोलाको किनारमा रहेको घरको आँगनमा कुराकानी गर्न तयार भएकी चाँदनी आफ्नै भाषा मैथिलीमा भन्नुभयो् – ‘पढैके जाईके मन है, नाहिं जाई पावैछि (पढ्न जान मन छ, जान पाउँदिन) ।’
कतिसम्म भने अरूको सरसफाई गर्ने तर आनैे स्वास्थ्य र सरसफाईमा ध्यान नदिने उनीहरूलाई फोहोरी देखिएकै कारण सबैले छिःछिः र दूरदूर गर्छन् । उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइँदैन, होटल र चियापसलहरूमा उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन । सुँगुर पालेर दुर्गन्ध फैलाउँछन् भनेर उनीहरूलार्ई गाउँदेखि परै सकभर खोलाको किनारतिर धकेल्ने गरिन्छ । सुँगुर पालेर गाउँ नै दुर्गन्धित बनाएको भन्दै डोम समुदायकालाई गाउँबाट निकालिएका घटना पनि धेरै छन् । चुनावको मुखमा मासु, मदिरा र केही हजार रुपैयाँ लिएर भोटका लागि मात्रै डोम बस्ती छिर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर राजनीतिमा ल्याउने दायित्वबोध गरेको देखिँदैन । यसले राज्यको मूलप्रवाहबाट डोम समुदाय निकै पछाडि पारिएको तथ्य प्रकाशित गर्छ ।
सरकारले दलितको नाममा दिने सेवा सुविधा र अधिकारको वितरण न्यायसङ्गत भए नभएको नियमन नगर्दा सबैबाट उत्पीडनमा परेको अल्पसङ्ख्यक डोम समुदाय राज्यको मूलप्रवाहबाट निकै पछाडि छाडिनु स्वाभाविकै हो । यसबारे अब नयाँ कोणबाट बहसपैरवी हुनु जरूरी भइसकेको छ । राज्यबाट दलित घोषित र दलितभित्र पनि साँच्चैको दलन उत्पीडनमा परेको समुदायको पहिचान गरी सेवासुविधा र अधिकारको न्यायसङ्गत वितरण गर्न अब ढिला भइसकेको छ । यसो नगरिँदासम्म उत्पीडित जाति समुदायको नाममा दलितभित्रकै अभिजात्य वर्ग अथवा जमिनदार, सम्पन्न र बाठा भनाउँदा पहुँचवालाले आफ्नो दुनो सोझ्याइरहने छन् । र, दलित मुक्तिको नारा नारामै मात्र सीमित हुँदै जाने छ । (लेखक हाल ढल्केवरमा रहेर स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)
कोरोना भाइरसमा सफाइकर्मीसँग अनागरिकको ब्यवहार : रजक
प्रदेश नं. २ को वर्तमान अवस्था र भावी सम्भाव
पढनै पर्ने कथा हो ! अनाथ